गायिका साकिराको कम्पनीले स्यानिटाइजर उत्पादन गर्दै ! – Sagarmatha Online News Portal
गायिका साकिराको कम्पनीले स्यानिटाइजर उत्पादन गर्दै !
काठमाडौं । विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का कारण विभिन्न देशमा स्वास्थ्य सामग्री अभाव भैरहेको बेला गायिका साकिराको कम्पनीले स्यानिटाइजर उत्पादन गर्न थालेको छ ।
विश्वभर फैलिरहेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि गायिका साकिराको परफ्युम उत्पादन गर्ने कम्पनीले स्यानिटाइजर उत्पादन गरिरहेको छ । साकिराले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम मार्फत कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्यानिटाइजर उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिएकी हुन् ।
बार्सिलोनास्थित पुइग कम्पनीले आफ्नो स्रोत र सुविधाको प्रयोग गरेर संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्यानिटाइजर उत्पादन गरिरहेको फोटोहरू उनले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेकी छन् । पुइगले कोलम्बियन कलाकारसँग सहकार्य गरेर विभिन्न परफ्युमहरू उत्पादन गर्दछ । जसमा गायिका साकिराको ‘ड्रिम एन्ड स्वीट ड्रिम’ समावेश छ ।
‘यस्तो अफ्ठ्यारो अवस्थामा पनि कम्पनीले सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ । मैले सहकार्य गरिरहेको परफ्युमहरू उत्पादन गर्ने पुइग कम्पनीले उनीहरूको स्रोत र सुविधाको प्रयोग गरेर स्यानिटाइजर उत्पादन गरिरहेको छ । सो स्यानिटाइजरको बिक्रीबाट उठेको रकम स्पेनको सरकारलाई प्रदान गर्नेछौं,’ उनले लेखेकी छन्, ‘समाज सेवाको लागि यो उदाहरणीय योगदान हो जस्तो लाग्छ । यसले अन्य कम्पनीहरूलाई प्रेरणा दिन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।’
Published On: २० चैत्र २०७६, बिहीबार
मेडिकल कलेजका कर्मचारीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु